Jiir loo adeegsado miino baarista | Somalia News
Jiir loo adeegsado miino baarista
Xigashada Sawirka, PDSA/PA
Jiir weyn oo laga qaaday Afrika ayaa la guddoonsiiyay abaal marin caalami ah kaddib markii lagu guuleystay in loo adeegsado miino baarista.
Jiirkan oo lagu magacaabo Magawa waxaa loo adeegsaday in lagu soo saaro ilaa 39 miinooyin ah iyo 28 hub aan qarxin ah.
Ha’yad samafal oo qaabilsan xaananada xoolaha ee uu fadhigeedu yahay UK ayaa bilad dahab ah ku abaal marisay jirkan, waxay sheegtay in loo adeegsaday baarista miinooyin halis ah oo laga soo saaray Cambodia.
“Shaqadiisa oo aheyd badbaadinta nolosha gaar ahaan deegaanada uu kasoo saaray miinooyinka halista ah ee dalka Cambodia” sida ay sheegtay ha’yadda PDSA.
Biladda ha’yadda samafalka ee PDSA ay siisay jiirkan waxaa ku qornaa “Xayawaanka geesiga ah ee shaqada sida daacadda ah u qabtay”, ilaa 30 xayawaan ayaa abaal marin la siinayay balse waxaa ugu horreeyay jiirka oo ku muteystay shaqada miino baarista.
Jiirka oo da’diisu lagu sheegay 7 jir waxaa lagu soo tababaray dalka Belgium- waxaana gacanta ku heysaa ha’ayad samafal oo la yiraahdo Apopo oo uu fadhigeedu yahay Tanzania- waxaana loo yaqaana ‘Jiirka halyeeyga ah’ , waxaa loo adeegsan jiray baarista miinada iyo dadka qabo cudurka qaaada tan iyo sagaashamaadkii.
“Sharaf ayay inoo tahay in aan helno biladda noocan ah” waxaa sidaas yiri madaxa fullinta ee ha’yadda Apopo, Christophe Cox xilli uu la hadlayay wakaaladda wararka ee PA .
Wuxuu intaas ku daray “Waa tallaabo micno weyn ugu fadhido shacabka Cambodia iyo guud ahaan caalamka oo la daalaa dhacaya dhibaatooyinka ka dhasha miinooyinka”
Agaasimaha ha’yadda abaalmarinta guddoonsiisay jiirka Jan McLoughlin, waxay ku tilmaantay shaqadiisa “Mid kheyrul caadi ah oo waxtar weyn leh”
“Magawa wuxuu badbaadinaya waxna ka baddalaya nolosha ragga, haweenka iyo carruurta ay saameeyeen miinooyinka, miino kasta uu soo saaro waxay ka hortageysaa halista dhimashada iyo dhaawaca”
Sida laga soo xigtay ha’yada miinooyinka baarta oo la yiraahdo HALO Trust, dalka Cambodia miinooyinka waxay ku dhintay ama ku dhaawacmay in badan 64,000 qof, miinooyinkaas oo dhulka lagu aasay sanadihii toddobaatamaadkii iyo siddeetamaadkii.
This post first appeared on BBC Somali - Somali. Read the http://www.bbc.com/somali/war-54290843original article
Previous articleXisbiyadaa Falastiin oo ku heshiiyey xiliga Doorashada
Next articleNearly 60,000 Somalis displaced by conflict, floods: OCHA